Faah-faahin kasoo baxeyso dagaal iyo duqeyn ka dhacday duleedka Gaalkacyo – STAR FM SOMALIA
Maamulka Galmudug ayaa sheegay in duqeynta lagu dilay askar ka tirsan ciidamada maamulkaasi oo saldhig ku lahaa deegaanka Godod ee duleedka magaalada Gaalkacyo.
Ku xigeenka duqa magaalada Gaalkacyo ee Galmudug C/raxmaan Maxamed Axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ciidamada Galmudug ee duqeynta lagu dilay ay ahaayeen 10 ruux.
Warar ay heshay Jowhar.com ayaa sheegaya in duqeynta ay geysteen diyaaradaha dagaalka kadib markii ay goobta la duqeeyay oo ay kusugnaayeen ciidamo ka tirsan Galmudug lagu wargeliyay iney ahaayeen Al-shabaab is urursanaya.
Saraakiisha maamulka Puntland ayaa dhankooda sheegay in weerarka iyo duqeynta lagu dilay xubno Alshabaab ka tirsan oo kusugnaa deegaanka ku yaala duleedka magaalada Gaalkacyo.
Warar kale oo Jowhar.com heshay ayaa sheegay in ku dhawaad 20 askari ay waxyeelo kasoo gaartay duqeynta ka dhacday duleedka magaalada Gaalkacyo.
Arintan ayaa aad looga hadal hayaa gobolka Mudug, waxaase saaka soo baxday in maleeshiyaad ay ku dagaalameen deegaanka Jeexdin.
Wariye C/casiis Xaaji oo lagu aasay Magaalada Muqdisho (Daawo Sawirada)